﻿9ရေပူသောက်သုံးခြင်း၏ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ကျန်းမာရေး
နေအိမ် ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး ကျန်းမာ oi-Neha Ghosh အားဖွငျ့ဖွစျသညျ Neha Ghosh ဖေဖော်ဝါရီလ 12, 2020 တွင်
ကြံ့ခိုင်ရေးဝါသနာရှင်များစွာနှင့်နာမည်ကြီးသူများသည်နံနက်ခင်း၌ဗိုက်ဆာ။ ရေပူတစ်ခွက်သောက်ခြင်းဖြင့်ကျိန်ဆိုကြသည်။ ဘာကြောင့်လဲသိလား နံနက်ယံ၌ရေပူသောက်သုံးခြင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းမှအစာကြေခြင်းကိုတိုးတက်စေသောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်အံ့ဖွယ်ရာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Ayurveda နှင့်ရှေးတရုတ်ဆေးဝါးများအရတစ်နေ့တာရေပူတစ်ခွက်ဖြင့်စတင်ခြင်းသည်စနစ်ကိုသန့်ရှင်းစေခြင်း၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုမြန်စေပြီးကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအားကောင်းစေသည်။
ရေပူအတွက်အကောင်းဆုံးသောအပူချိန်မှာ ၁၂၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှ ၁၄၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကြားရှိသင့်သည်။ ဒီကျော်လွန်အပူချိန်သင့်ရဲ့အရသာဘူးသီး scald လိမ့်မယ်။
နံနက်ယံ၌ရေပူသောက်ခြင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာပူနွေးသောရေသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အပူချိန်ကိုမြင့်တက်စေသည်၊ အလှည့်တွင်ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းမြင့်တက်စေသည်။ သင့်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းတိုးလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်တစ်နေ့လုံးကယ်လိုရီပိုမိုလောင်ကျွမ်းနိုင်ပြီးကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေသည်  ။
နံနက်ခင်းတွင်ရေပူသောက်ခြင်းကအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းကိုအားဖြည့်ပေးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှအဆိပ်များကိုဖယ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေပြီးအူသိမ်အူလမ်းကြောင်းပုံမှန်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်အစာခြေလမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်စေသည်။ ၎င်းသည်အစာများကိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပေးသောအစားအစာများကိုဖြိုခွဲရာတွင်လည်းအထောက်အကူပြုသည်။
ရေပူရေသောက်ခြင်းသည်အသည်းခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်အတွက်အကျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်စုဆောင်းထားသည့် mucous များကိုဖယ်ရှားရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။ sinus ၏ပိတ်ဆို့မှုကိုသက်သာစေသည်။ [နှစ်ခု] ။
5. ခန္ဓာကိုယ်ကို detoxifying ကူညီသည်
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအဆိပ်အတောက်များကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမှုအတွက်ရေပူသည်ကူညီသည်။ သင်ပူနွေးသောရေကိုသောက်သောအခါ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ ချွေးများနှင့်ချွေးများကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှအဆိပ်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
ပူနွေးသောရေမှအပူသည်အအေးကိုကုသရာတွင်နှင့်ရင်ဘတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုသက်သာစေရန်အလွန်ထိရောက်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ရင်ဘတ်မှချွဲများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးအကှေးများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ [နှစ်ခု] ။
9. Achalasia လက္ခဏာတွေသက်သာ
Achalasia သည်နာတာရှည် esesophageal sphincter (LES) ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောနာတာရှည်ရောဂါဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရရေပူသောက်သော Achalasia လူနာများသည် Achalasia ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေခဲ့သည်။  ။
ရေကအရမ်းပူမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့လျှာကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ရေကထိတွေ့ဖို့အတွက်နွေးထွေးစွာနွေးထွေးသင့်သည်။ သို့မှသာသင်သောက်သောအခါသင်လောင်ကျွမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရရန်သင်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးရေ ၂ လီတာသောက်သင့်သည်။
ဘန်ဂလီ aloo dum လုပ်နည်း
eid ul adha အင်္ဂလိပ်စာနှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကား